IZIBONELELO EZI-9 EZIMANGALISAYO ZOKUNGATSHATI EKUNGEKHO NAMNYE OWAKUXELELAYO NGAPHAMBILI - UNXIBELELWANO
Izibonelelo ezi-9 ezimangalisayo zokungatshati ekungekho namnye owakuxelelayo ngaphambili
Ndiqinisekile ukuba uninzi lwabantu kubudlelwane bexesha elide lusizi ngokufihlakeleyo. Ngokuqinisekileyo, kumnandi ukuba neqabane oza kungcangcazela nalo, kodwa ubudlelwane bunokuba yinto engathandekiyo. Ukuba awundikholelwa, cinga ngezi zibonelelo zimangalisayo zokungatshati:
1. Unokuhamba ngokuthanda.
Ucinga ukuba iqabane onothando lingasabela njani xa uvukile kwaye uthathe isigqibo sokufudukela phesheya kolwandle, uhamba ubhaka ezintabeni zase-Iceland, okanye uthatha uhambo oluya kwindawo eshushu? Mhlawumbi ngekhe bonwabe ukuba awuzange ubabandakanye kweso sigqibo (kwaye kufanelekile!).
Abantu abangatshatanga, nangona kunjalo, banenkululeko yokuhamba ngaphandle kwamathandabuzo. Ukuba ungumntu ohambahambayo entliziyweni, ke ukungatshati kunokuba kuwe.
2. Ungadlala ngothando ngaphandle koloyiko.
Masijongane nayo: wonke umntu uyadlala ngamanye amaxesha, nokuba akatshatanga okanye akunjalo. Oku kudlala ngothando kuhlala kungenatyala kwindalo, kodwa kungakhokelela kwimeko engathandekiyo ukuba umntu ongatshatanga uphela ekhulisa iimvakalelo zomntu obandakanyekayo kwezothando.
Yongeza iqabane elingakhuselekanga kumxube kwaye le meko imbi inokuthi ngokukhawuleza ijike ibe kukungavisisani. Ukuba uyakuthanda ukudlala ngothando, ukungatshati kunokuba kuwe.
3. Ungasebenza ngokwakho.
Kuyamlingisa ngokumangazayo ukuba ungoneliseki xa uneqabane.
Uphando olwenziwe ngabaphandi base-UK lufumanise ukuba i-62% yabaphenduli ifumene iipawundi ezili-14 okanye nangaphezulu emva kokuqala ubudlelwane.Oku kuzuza ubunzima kubonakala kusisiphumo esithe ngqo semisebenzi yasebusuku yomhla. Xa bebuzwa ukuba bakhethe umsebenzi wabo wokuqala wokudibanisa, i-30% yabaphenduli bakhethe ukubukela umabonwakude kwaye i-20% ikhethe ukutya ngaphandle.
Ukuba ungathanda ukugxila ekuphuculeni ingqondo nomzimba wakho, emva koko ukungatshati kunokuba kuwe.
4. Ungagcina iitoni zexesha.
Kumnandi ukuthumela iitekisi ezinobungqina ngasemva nangaphambili, kodwa ngaba unokucinga ukuba lingakanani ixesha elichithwa zizibini eziqhelekileyo kwiifowuni zazo?
Uninzi lwabantu luba nexhala ngaphandle konxibelelwano rhoqo, ke ezo tekisi kunye neefowuni zinokongeza kwilahleko yeeyure ezininzi ngosuku. Ewe unokukhetha iqabane elizimeleyo ngakumbi, kodwa ukufumana isidalwa esinjalo kunokuba ngumsebenzi onzima.Intengiso
Ukuba ukhetha ukutyala ixesha lakho ngendlela enemveliso ngakumbi, ukungatshati kunokuba kuwe.
5.Ungalala ngoxolo uzolile.
Ukuvuma isono: Ngokwenene, ngokwenene , Ngokwenene phosa ukukhumbula. Ndikhe ndahlala ndingatshatanga okwethutyana, kwaye ndiyayithanda ubukhulu becala… kodwa ukungabikho kochukumiso lomzimba kundenze ndaphambana (mhlawumbi kufanele ukuba ndiqale ukuqokelela izicelo zomhlobo wam?).
Oko kusizisa kwinqanaba: nangona kumnandi ukuntywila, ndinelona xesha linzima lokulala ecaleni komnye umntu (ngakumbi ukuba bayarhona!). Ukuba uyayazi loo mvakalelo, ukungatshati kunokuba kuwe.
ukukhwaza nokumemeza kubudlelwane
6. Unokuzithemba ngakumbi.
Ngaba ukhe wehlelwa kukuqhekeka kabuhlungu ngokweemvakalelo kangangokuba ungabinakho ukusebenza iiveki, okanye iinyanga, emva koko?
Uthando lusisidubedube esinokuba sihle kwaye sonakalise (wena yenza yazi iinkqwithela zithiywe ngabantu, kunene?). Iimvakalelo ezinqwenelekayo azinakho kwaye azifanele ukuthula. Kodwa ungaze uvumele umntu ukuba abe sisifundo esinye kwiingcinga zakho, kuba zimbalwa ubudlelwane obumiselwe impumelelo engunaphakade.Intengiso
Ukuba awukhululekanga ngalo mngcipheko, ukungatshati kunokuba kuwe.
7. Ungahlala unxibelelana nabahlobo.
Sukuba nexhala; siza kuhlala sinxibelelana! La magama kufuneka avakale uqhelekile ukuba unabahlobo abatshatileyo kunye / okanye abanabantwana.
Bangaphi kubo abagcina isithembiso sabo? Akuninzi, ndibheja.
Oku akufuneki kumangalise kuba ezi zigqibo ziphambili zobomi zifuna ukuzincama ngexesha kunye nenkululeko yobuqu. Kunzima ukufumana ixesha lokwenza okuninzi xa uneqabane kunye nomntwana ekufuneka ucinge. Ukuba awukakulungeli ukuzibophelela okunjalo, ke ukungatshati kunokuba kuwe.
8. Ungakuphepha ukuzinza emdlalweni ongalunganga.
Phantse i-50% yemitshato eMelika imiselwe ukusilela.Kuya kufuneka uzibuze ukuba bangaphi abo basatshatileyo abahlala kunye ngenxa yeenkolo, izizathu zemali,okanye ngenxa yabantwana babo.Intengiso
Ukugqibezela lo mfanekiso mbi, yongeza kwindlela ekulula ngayo ukuhlala kumdlalo ombi xa uziva ulilolo. Ukuba awuqinisekanga nge-100% malunga noko ukulindeleyo kwiqabane, ukungatshati kunokuba kuwe.
9. Unokwenza nantoni na isihogo ofuna ukuyenza.
Kanye njengentyatyambo iya kubuna xa ungayinkcenkcesheli, ubudlelwane buya kusokola ngaphandle kononophelo olufanelekileyo kunye nokuqwalaselwa.
Ngaba unaye umhlobo okhalaza ngendlela elihlwempu ngayo iqabane lakhe? Esi sikhalazo sinokuthetheleleka ngokuxhomekeke kumxholo, kodwa uninzi lwabantu luthatha kancinci ukuba lithatha ixesha elingakanani ukugcina ubudlelwane obunempilo.
Akukho nto ingaqhelekanga ngokufuna omnye wakho obalulekileyo ukuba achithe ixesha nawe. Ukuba awukakulungeli ukuqaphela iimfuno zomnye umntu, ukungatshati kunokuba kuwe.
Ikhredithi yefoto ebonisiweyo: Unsplash nge unsplash.com Intengiso
 ^ Yonke imihla yezonyango: Ulwalamano Gut: Abantu kubuDlelwane bafumane ubunzima kunye neBurp Phambi Kwabanye abaBalulekileyo
 ^ Ijiology: Amagama enkanyamba -Azibizwa Njani Iinkanyamba?
 ^ Umbutho wezengqondo zaseMelika: Umtshato noqhawulo-mtshato
 ^ Iposi: Uqhawulo-mtshato lubiza kakhulu kubantu abahluphekayo baseMelika, isifundo esitsha sithi
Kutheni kubalulekile ukwenza uphawu lomntu siqu
Ileta efanelekileyo yengcebiso eyakha yakho
iimpawu zenkokeli ephumeleleyo
ukuba nobudlelwane nomntu osela utywala
yibulela ngento onayo
Unxibelelwano Lonwabo Izifo Eziqhelekileyo Ixesha Lokulawulwa Kwemveliso Yesihloko Ukhuselo Lokusingqongileyo 2 Ukuziphatha Komntwana